Live-action Archives - MoviesFan
Arrietty ဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်ကို တမူထူးခြားတဲ့ပုံစံနဲ့ တွေ့မြင်နိုင်မဲ့ The Borrowers
Arrietty ဆိုရင်တော်တော်များများကJapanese Anime ဖြစ်တဲ့ The Secret World of Arrietty ထဲက Arrietty ကိုပဲသိကြတာများပါတယ်။ ဒါပေမဲ့The Secret World of Arrietty ရဲ့Official Poster မှာပါဝင်တဲ့ Based on the Award winning Novel “The Borrowers” ဆိုတဲ့ စာကြောင်းလေးကိုသတိထားမိကြလားတော့မသိပါဘူး။
တကယ်တော့ Arrietty ဆိုတာ Read More
Adventure, Comedy, Live-action, movie, Movie Review, Review
Genie ဇာတ်ရုပ်အတွက် တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားနေမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ Will Smith
Hollywood ရဲ့ နာမည်ကျော် လူမည်းမင်းသားချောကြီး Will Smith က Live Action အဖြစ် ပထမဆုံးအကြိမ် ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားခဲ့တဲ့ Disney ရဲ့ Aladdin ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသစ်ထဲမှာ မီးခွက်စောင့်ဘီလူးကြီး Genie နေရာကနေ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရတာဟာ သူ့အတွက် တုန့်လှုပ်ခြောက်ခြားစေခဲ့တယ်လို့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာခဲ့ပါတယ်။
Genie နေရာမှာ Will Smith သရုပ်မဆောင်ခင် ၁၉၉၂ခုနှစ်က ထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့ Read More
celebrity news, Fantasy, Hollywood, Live-action
ဇာတ်လမ်းရဲ့ အကျဉ်းချုပ်ကို ပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ Read More
Season 14 ကို ဆက်လက်ပြသတော့မယ့် Supernatural
” Dad’s onahunting trip. He hasn’t been homeafew days. ” ဒီစကားကို ကြားလိုက်တာနဲ့ ကမ္ဘာကျော် Supernatural series ဆိုတာ သိကြမှာပါ။ အဖေကို အရမ်းချစ်ပြီးတော့ မိသားစုအတွက်ဆိုရင် ဘာမဆို ပေးဆပ်ရဲတဲ့အကို Dean အဖေကို အမြဲတမ်း ဂလန်ဂဆန်လုပ်တတ်တဲ့ ညီလေး Sam မိတဆိုး ညီအစ်ကို နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး မကောင်းဆိုးဝါးတွေကို အမဲလိုက်တာတွေ လူတွေကို ကယ်ဆယ်တာတွေကို ဇာတ်အိမ်ဖွဲ့ပြီး ရိုက်ကူးထားတာပါ။ ဒီစီးရီးကို 2005 ခုနစ်ကတည်းက စတင်ပြသလာတာဖြစ်ပြီးတော့ အခုဆိုရင် Season 14 အထိ Read More